On jan 9, 2019 21 843
Anisan’ny fanamby napetraky ny Zandarimariam-pirenena Malagasy ny ady atao amin’ny kolikoly, ankehitriny. Anton’izay, ny famerana ny fitsaram-bahoaka izay nahazo vahana manerana ny Nosy. Torak’izany ny famerenan-kasina ny sampandraharam-panjakana manoloana ny filan’ny vahoaka. Tao anatin’ny vondron-toby Mandritsara sy Befandriana avaratra, any amin’ny Faritra Sofia dia azo notsapain-tanana ny vokatra, tamin’izay ady natao hamongorana ny kolikoly sy ny tsy fandriampahalemana ankapobeny izay. Raha ny fitsaram-bahoaka fotsiny izao, tranga iray no nisy nandritra ny taona 2018, raha nisy dimy izany ny taona 2017. Tsy nisy ny olona voasambotra hatreto raha nahatratra 25 ny olona voarohirohy tamin’ny taon-dasa.
Sary ZP: Kaompania Mandritsara
“Tanjona dia mba hisian’ny fiarahamonina mirindra anaty filaminana sy fandriampahalemana. Marina fa sarotra, ary betsaka ny olona tsy faly amin’ny ady atao hamongorana ny kolikoly izany, saingy tsy ataontsika-vato misakana akory izany. Izahay ato anivon’ny zandarimariam-pirenena manokana, izay tarihiko, dia tsy mikely aina manao izay tratra. Miasa ho an’ny tombotsoa imbonana izahay fa tsy sanatria natao hiaro tombontsoan’olom-bitsy”, hoy ity manamboninahitra ity nandritra ny resaka nifanaovana taminy.
“Amin’izao fotoana izao, tsy mikely aina izahay mitady ny fomba rehetra mba hitohizan’ny fifehezana ny fandriampahelamana ato amin’ny faritra. Nihena ny tahan’ny fandikan-dalana ato Mandritsara sy Befandriana Avaratra rehefa ampy ny fanentanana ny mponina, sy rehefa tafapetraka ny fifampitokisana amin’ny vahoaka sy ny manampahefana”, hoy hatrany izy nanazava.
Sary ZP-Kaompania Mandritsara
Fanamby mbola apetraky ny kaompanian’ny zandarimarim-pirenena ao Mandritsara rahateo ny hitohizan’ny fiarahamiasa matotra amin’ny mpiantsehatra rehetra amin’ny fitandroana ny fandriampahalemana any an-toerana. “ Mandray andraikitra izahay @ ady @ kolikoly satria miantraika mivantana @ tsy fandriam-pahalemana ny firongatr’izy io » Tsy azo iverenan-dalana raha ny ady amin’ny kolikoly ataon’ny ZP aty Mandritsara, satria fotoana izao hiainan’ny vahoaka amim-pilaminana.”, hoy ity Kaomanda ity namarana ny resaka.
TATITRA MOMBA NY ASA VITAN’NY KAOMPANIAN’NY ZANDARIMARIA MANDRITSARA 2018
Toerana niasana: Mandritsara et Befandriana-Nord.
Tranga 2017 2018 Fanamarihana
1) Halatra omby Tranga 63 49
Omby nangalarina 457 135
Omby novonoin’ny dahalo 33 12
Omby tafaverina 210 88
2) Dahalo voasambotra Voasambotra 91 (42MD-49LP) 75 (33MD-42LP)
Maty na naratra 00 02
3)Fitaovam-piadiana Basy vita gasy 04 06
Basim-borona sy PA
4) Rongony Rongony voageja 205 kg 233 kg efa nodorana
Olona voasambotra 10 (tous MD) 03 (tous MD)
5) Asan-jiolahy mahery vaika Tranga 05 01
Olona voasmabotra 09 (06 MD-03LP) 02 ( MD)
Teti-bidin’ny zavatra very 104.780.000Ar 2.370.000Ar
6) Halatra lavanila Tranga 58 34
Lanjan’ny lavanila very 1250kg 385 kg
Tafaverina sy nodorana 456kg 270 kg
tafaverina sy nomena ny tompony 310 kg 115kg
olona voasambotra 85 (54MD-31LP) 57 (34MD- 23LP)
7)Fitsaram-bahoaka Tranga 03 06 (nov et dec 18)
Asa fanentanana 25 40
tranga 05 atao fanadihadiana
Olona nosamborina 25 (11MD-14 LP) —
8) Hetsika Fampandiana fahalemana Tao amin’ny Kaompania 04 06
Hetsika nasionaly nandraisan’ny Kaompania anjara 05 06
9) Ady amin’ny kolikoly Fitoriana zandary 02 (tsy nitombina) 00
Sensibilisation de la population contre le phénomène 25 30
10) protection des patrimoines de la GN Bornage et clôture face aux squatteurs 50% des terrains en risque sont protégés 80% des terrains en risque sont désormais protégés